Nhau dzeBhaibheri: Jehoshafati Anovimba naJehovha - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Unoziva here kuti varume ava ndivanaani nechavari kuita? Vari kundorwa, uye varume vari pamberi apo vari kuimba. Asika ungati: 'Neiko vaimbi vasina minondo namapfumo okurwa nawo?' Ngationei.
Jehoshafati ndimambo woumambo wendudzi mbiri dzaIsraeri. Anorarama panguva imweyo naMambo Ahabhi naJezebheri voumambo hwendudzi 10 hwokumusoro. Asi Jehoshafati ndimambo akanaka, uye baba vake Asa vaivawo mambo akanaka. Saka kwamakore mazhinji vanhu voumambo hwendudzi mbiri hwokuzasi vanofarikanya upenyu hwakanaka.
Asi zvino chimwe chinhu chinoitika chokutyisa vanhu. Nhume dzinoshuma kuna Jehoshafati kuti: 'Uto guru rinobva kunyika dzeMoabhi, Amoni neGomo reSeiri riri kuuya kuzokudenhai.' VaIsraeri vazhinji vanoungana paJerusarema kuzotsvaka betsero yaJehovha. Vanoenda kutembere, uye ikoko Jehoshafati anonyengetera: '0 Jehovha Mwari wedu, hatizivi chokuita. Hatinesimba rokurwisana neiri uto guru. Tinovimba nemi nokuda kwebetsero.'
Jehovha anoterera, anoita kuti mumwe wavabatiri vake audze vanhu kuti: 'Hondo haizi yenyu, asi ndeyaMwari. Imi hamungafaniri henyu kurwa. Ingoonai bedzi, mugoona kuponeswa kwamuchaitwa naJehovha.'
Nokudaro mangwanani Jehoshafati anoudza vanhu kuti: 'Vimbai naJehovha!' Ibvei obudisira vaimbi pamberi pamasoja ake, uye zvavanofora vanoimba rumbidzo kuna Jehovha. Unoziva here kuti chii chinoitika pavanosvika pedyo nehondo? Jehovha anorwisanisa masoja omuvengi pakati pao amene. Uye panosvika vaIsraeri, musoja womuvengi ari wose afa!
Jehoshafati akanga asina kuchenjera here mukuvimba naJehovha? Tichava vakachenjera kana tikavimbawo Naye.
1 Madzimambo 22:41-53; 2 Makoronike 20:1-30.
Jehoshafati ndiani, uye anorarama panguva ipi?
Nei vaIsraeri vari kutya, uye vakawanda vavo vanoitei?
Jehovha anopindura kutii kumunyengetero waJehoshafati?
Jehovha anoita kuti chii chiitike hondo yacho isati yagundika?
Tinogona kudzidzei kuna Jehoshafati?
Verenga 2 Makoronike 20:1-30.
Jehoshafati akaratidza sei zvinofanira kuitwa nevashumiri vakatendeka vaMwari pavanotarisana nemamiriro ezvinhu anotyisa? (2 Mak. 20:12; Pis. 25:15; 62:1)
Sezvo Jehovha agara achishandisa nzira yokukurukurirana nayo pakubata nevanhu vake, nhasi anoshandisa nzira ipi? (2 Mak. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Joh. 15:15)
Mwari paanounza ‘hondo yezuva guru raMwari Wemasimbaose,’ mamiriro edu ezvinhu achava akafanana sei neaya aJehoshafati? (2 Mak. 20:15, 17; 32:8; Zvak. 16:14, 16)
Achitevedzera vaRevhi, nhasi mapiyona nemamishinari anotsigira sei basa rokuparidza mupasi rose? (2 Mak. 20:19, 21; VaR. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)